Ikhaya / Blog / Ukuqothuka
Ngabe ukuqothuka kuyawachitha yini amaphuzu esikweletu futhi kubiza malini ukuqasha ummeli ukuze afake imali yokuqothuka?
Kwangathi 30, 2019 UkuqothukaShiya amazwanaUDerek Soltis
Kubiza malini ukufaka ukubhanga? Futhi, ingabe ukuqothuka kubhubhisa isikweletu sami?
Sawubona, igama lami nginguDerek Soltis. Ngingummeli lapha emahhovisi ezomthetho ePatel, Soltis & Cardenas.
Zonke izinsuku ngithola ezimbili ...
Kwangathi 2, 2019 Ukuqothuka, Ukuqothuka kweNew Jersey, Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York2 AmazwanaUVeer Patel
Izeluleko ze-3 Zokuxazulula Kalula Izinkinga Zokubika Izikweletu Ngemuva Kokuqothuka
Mashi 11, 2019 Ukuqothuka, Amaqoqo EzikweletuShiya amazwanaSubhan Tariq
Xazulula Izinkinga Zokubika Izikweletu Ngemuva Kokuqothuka
Ufuna ukuthi uzilinganise kanjani izingqinamba ezilandelayo ngemuva kokuthola umsebenzi wokuqothuka eNew York ngokuxazulula izinkinga zokubika isikweletu?
<! - / wp: isigaba ...
Ukuqothuka Njengekhambi Elisebenzayo Izinkinga Zakho Zezezikweletu
December 4, 2018 UkuqothukaShiya amazwanaJohn Anderson
Iningi labantu libhekana nobunzima bezimali ngasikhathi esithile ezimpilweni zabo. Noma ngabe le nkinga idalwa ngenxa yezinkinga zomndeni noma zochwepheshe, ibukeka ingaphezu kwamandla kokhokhayo. Kunoma ikuphi, isimo sakho sezezimali akudingeki sisuke kokubi siye ...
Ukuqothuka sikuqeda kanjani ukuxoshwa eNew Jersey?
October 30, 2018 Ukuqothuka, Ukuqothuka kweNew Jersey, Ukuxoshwa kwe-New JerseyShiya amazwanaLazaro Cardenas
Ukuqothuka kweSahluko 13 kuzothuthukisa ukuxoshwa eNew Jersey kokungakhokhi Intela.
Ukugcwaliswa kwecala 13 kwisahluko kufanele kumise ukuxoshwa ngenxa yokwehluleka komqashi ukukhokha irenti. Ukugcwaliswa kokuqothuka kweSahluko 13 eNew ...
Ngingabuyisela yini ilayisense lami lokushayela uma ngifela ukuqothuka?
October 17, 2018 UkuqothukaShiya amazwanaUDerek Soltis
Ungayibuyisela emuva ilayisense lakho lokushayela uma umemezela ukuthi izahluko 7 noma izahluko 13 ukuqothuka
Ukuqunjelwa yiSears kuthinta kanjani wonke umuntu?
October 16, 2018 UkuqothukaShiya amazwanaUDerek Soltis
Ijaji lokuqothuka livuma izigidi ezingama- $ 300 ngoxhaso lwezezimali kumaSears
Ungalwa kanjani ne-New Jersey Foreclosed yakho uma kukhona ukwephulwa kwe-Federal Truth In Lising Act. (Ukwephulwa kwe-TILA)
September 27, 2018 Ukuqothuka, Ukuvikelwa Kwemboni YeNew YorkShiya amazwanaUVeer Patel
Ukwephulwa kwe-TILA Kuhlanganiswe Ukuqothuka Kesahluko 13 kunganciphisa lokho okuKhokhela Ibhange Lakho
I-True in Lising Act (TILA) idinga "ukudalulwa okunengqondo kwemibandela yesikweletu" yemalimboleko yakho ebolekwe ngumthengi wakho ekhaya ...
Xhumana nommeli waseNew York Bankruptcy kwa-844-533-3367-Kubiza malini ukufayela ngokuqothuka eNew Jersey
September 26, 2018 UkuqothukaShiya amazwanaUDerek Soltis
Kubiza Kangakanani Ukubiza Ukuqothuka e-NJ?
Wonke umuntu ohlela ukufayela ukuqothuka kudingeka aqonde ukuthi kuzokubiza malini. Ukuqothuka kuza ngesikhathi lapho imali nekhredithi zingase zibe khona kakhulu kulowo ohlela uku ...
Kusho ukuthini uma uthola “Ukukhonjwa Kwama-Trustee Ukuqinisekiswa Kwecebo”?
August 27, 2018 Ukuqothuka, Ukuqothuka kweNew Jersey, Ukuqothuka kweNew YorkShiya amazwanaUDerek Soltis
Uyitholile yini i- "Trasti's Objection to Confirmation of Plan" yokuqothuka kwakho?
Lokhu kungapela ukuphela kwecala lakho, noma kungaba yicala nje emgaqweni ukuze uhlelo lwakho luqinisekiswe. Uma ungenzi lutho, cishe ...
Yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene Zezikweletu ezingadedelwa ekuqothulweni kwemali?
August 23, 2018 UkuqothukaShiya amazwanaJohn Anderson
Hlobo luni lwesikweletu oluxolelwe ngokuqothuka?
Abantu bafuna ukuqothuka lapho imizamo yabo yokuhlangabezana nezikweletu zabo ifiphala. Ukuqothuka kunikeza indlela esemthethweni yokuqeda izikweletu zakho. Lokhu kukuvumela ukuthi ungabe usabuyisela imali yakho ...
I-New Jersey Ihola Izwe laseMelika Ekubhekeni Ngembonakalo
August 8, 2018 Ukuqothuka, Ukuqothuka kweNew Jersey, Ukuvikelwa Kwemboni YeNew York1 CommentUVeer Patel
Ukubikezelwa kweNew Jersey Kuphakamisa Izwe Ngeziqu zokuqala ze2 ze-2018
I-Attom Data Solutions ibike ukuthi izinga lokudalulwa okwenziwe eNew York laliphezulu kunanoma yisiphi esinye isimo hhayi engxenyeni yokuqala ye-2018, nelesibili ...
Ingabe Othembekile Angamemezela Ukuqothuka?
July 25, 2018 UkuqothukaShiya amazwanaUDerek Soltis
Kungenzeka yini ukuthi iTrasti imemezele ukuqothuka?
Ngabuzwa lo mbuzo ngesonto eledlule, futhi njengoba cishe nayo yonke imibuzo ebuzwa kummeli impendulo yayikuthi, "Kuya ngokuthi." Ukuthenjwa kuvame ukusetshenziselwa ukudlulisa ingcebo noma impahla ngokuncane ...
Ama-Filamu Asetshenziselwa Ukuqothuka Osuku Olunye E-California
April 3, 2018 UkuqothukaShiya amazwanaJohn Anderson
Ngokugcwalisela iCity 7 noma iSahluko 13 Bankruptcy, amafomu amaningi kufanele afakwe eNkantolo Yokuqothuka. Isibonelo, ubufakazi bezinyanga ezidlule ze-6 zengeniso etholiwe kanye ne-Means Test. Uhlu lwazo zonke izimpahla eziphethwe njengokuhlala, izimoto, ...
Ama-Pitfalls Ahambisana Nezinhlelo Zokuhlawula Izikweletu
February 20, 2018 UkuqothukaShiya amazwanaJohn Anderson
Ukuqedwa kwesikweletu kuvame ukukhangiswa njengeyona ndlela engcono yokuthola ukukhululeka lapho usenkingeni yezimali futhi ungakwazi ukukhokha eminye imali nganoma yisiphi isikweletu noma imalimboleko. Kodwa-ke, akunjalo. Ukuqedwa kwesikweletu kuyaziwa ukushiya ...
Ngabe nawe wehla kuFayili Ukuqothuka?
January 22, 2018 UkuqothukaShiya amazwanaUDerek Soltis
Ngabe uzizwa sengathi ungenzi imali eyanele yokufaka imali ngokuqothuka eNew Jersey?
Kungazwakala njengokuphikisana, kodwa abanye abantu abanayo imali eyanele yokufaka imali yokuqothuka. Ngokusho kwe-CNN amakhulu ezinkulungwane ...
ikhasi 1 ikhasi 2 >